Sport Armbands & Chiuno Bhegi
Unofarira mitambo yekunze? Uri kunetseka here nezvekushaya nzvimbo yekuchengetera nharembozha yako kana zvakakosha uchirovedza muviri? Yedu fashoni yemitambo armbands & muchiuno bhegi inonyatso kugadzirisa ako mapuzzle, uye usambove neruzivo rwekusaziva kwekuisa yako nhare kana imwe yemunhu ive ...
Wana Kugadzira NeMatanda Zvinhu Zvekushambadzira
ne admin pane 21-09-01
Uri kutsvaga eco-hushamwari nzira yekusimudzira kukwidziridzwa kwako? Iwe uri kuda here chigadzirwa chekushambadzira chakagadzirwa kubva kune zvakasikwa zvinhu zvekushandisa seanopa kana kusimudzira yako brand? Uye kana uchifanira kuva nezvinetsekana nezve kubvisa marara epurasitiki kune zvakatipoteredza, matanda ekushambadzira zvinhu wou ...
Akasiyana Anoshanda Makapu
Pretty Shiny Gifts haingogone kupa lapel pini, medallion, embroidery zvigamba, lanyard, asi zvakare inokwanisa kuburitsa marudzi ese emakepisi senge emauto Beret, sevhisi kapu, snapback cap, mutambo wezuva visor, spiral foam caps, promotional cap, woolen hat , silicone yekushambira ngowani, EVA furo nguwani, kushanda ha ...
Durable Name Badges, Name Plates, Name Mazita
Zita mazita mabheji anonziwo mazita ezita, mazita emazita. Haisi chete chinhu chinobatsira chakakodzera kuzivikanwa kwevashandi, asi zvakare chikamu chakakosha chebhizinesi rese rakatarisana nevatengi kuratidza yavo yemakambani mufananidzo & tsika. Hazvina mhosva kuti uri makuru emarudzi epasi rose mabhizimusi kana madiki mabhizinesi emhuri, ...
Stationery Inoisa Vana Party Zvipo
ne admin pane 21-08-11
Stationery yakamisikidzwa izita rezita rinoreva zvekutengesa zvinogadzirwa zvekumonyesa, zvinosanganisira bepa rakatemwa, mahamvuropu, zvishandiso zvekunyora, rinoenderera fomu fomu, uye zvimwe zvinopihwa muhofisi. Uchave mwaka mutsva wechikoro wekuuya kwaGunyana. Wakagadzirira here mamwe mamiriro ...
Zinc Alloy Zviratidzo & Mabheji
ne admin pane 21-08-04
Zinc chiwanikwa chine zvinhu zvakasiyana-siyana zvine muganho mushoma, zvichienzaniswa nendarira enamel pini, zinc alloy zviratidzo nemabheji zvinodhura zvakanyanya kunyanya kana odha huwandu hwakakura kana pini saizi yakakura. Kune yakakura saizi zinc alloy bheji, inogona kuve yakatetepa nees ...
ne admin pane 21-07-28
Ungade here kugadzira mamwe emhando yepamusoro mazango esimbi kune ako accessories? Ndokumbirawo uuye ubatane nesu, Pretty Shiny Zvipo zvinozadzisa chishuwo chedu uye nekuunza pfungwa yako muhupenyu chaihwo. Isu takapa hukuru hwakavhurika dhizaini yeyakapenderedzwa mitsipa, zvishongo zvemashiripiti, zvipfuyo zvemhuka, chishongo cheKisimusi kuti iwe ...
Biodegradable TPU Chigadzirwa Kuunganidzwa
Unogona kucherechedza kuti kuri kuramba kuchipisa uye kuchipisa muzhizha, kuchitonhora nekutonhora munguva yechando. Kuchengetedzwa kwenharaunda kuri kuve kunofanirwa. Pamwe chete nevanhu kuchikumbiro chekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza chepamusoro & chakakwirira, nekudaro, izvo zvinhu zvinogona kuve zvinogadziriswa ndezve maitiro. Kunze kwe ...
Classic Cloisonné Lapel Pin & Bheji
Cloisonné bheji inonziwo yakaoma enamel bheji, inova tsika yechinyakare uye ine nhoroondo refu. Zvave zvichinzi dzakaomarara enamel mabheji anogona kuchengetedzwa kwemakore zana asina kupera nekuti iwo mavara anotorwa kubva kune chicherwa ore uye akapiswa pa850 degree centigrade. Tinoshandisa zvakaoma e ...
Midziyo Yekugwinya Kwemusha & Kurovedza muviri
Munguva yakaoma panguva yeCOVID-19, chii chatingaite kuzvidzivirira isu nevatinoda? Kunze kwekupfeka kumeso kumeso kana uchienda & kugeza maoko kazhinji, ita zvakanyanya kurovedza muviri uye kusimudzira immune system yedu ingave imwe sarudzo yakanaka. Nekudaro, vanhu vane nzvimbo shoma uye kugadzikana kwehutano ...
Leather chigadzirwa chechisikigo chine anopfuura zviuru zvemakore nhoroondo. Iyo dehwe rakagadzira chiyeuchidzo chinhu chinotaridzika uye hachimbobuda kunze kwechitaera, saka dehwe chinhu chakanakira zvinhu zvinoshandira zvazvino zvido uye zvakakura kune epamusoro-magumo ekushambadzira zvipo zvinhu. Runako Shiny Zvipo zvinogona kupa akasiyana mhando ...